ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိတ်၏မကျြနှာမှုတ်မပေးနိုင်သလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အယူသီးမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလည်းဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်သူတို့ကိုငါမသိရပါဘူး။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတစ်ဦး၏မျက်နှာ၌မှုတ်မရသင့်ပါတယ်။ လေထုတွင်, သငျသညျခငျြဘူးလျှင်အဖြစ်ဒဏ်ငွေမှုန်ခံတွင်း၌ချွဲ, တံတွေးများနှင့်အခြားအရည်များပိတ်မိခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်အခစေသည်နေကြသည်။ ဒါဟာ microparticles, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအမှုန်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်များစွာသောရောဂါများရန်မပဋိသူကဒီရောဂါကူးစက်ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို၎င်း, ကလေး, နေမကောင်းပေမည်။ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်အန္တာရာယ်မှမ သာ. ကောင်း၏။ ဘုရားသခင့သတိထား berezht ။
ကောင်းပြီဒါဆိုကကလေးတစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ရှိပါတယ်သော auric yaytso.Delo ကိုချိုးဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူး, ထို့နောက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအပေါ်မှုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆေးပညာရှုထောအမှတ် (ဗိုင်းရပ်စ်များ, ပိုးမွှား) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း vsem.Chto ထံမှ esotericism နှင့်အယူသီးမှုမှကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်မဟုတ်ဘူး မိမိအမိနှင့်အကြောင်းနှင့်အတူ, စွမ်းအင်လယ်ပြင်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်တိုက်ပွဲတွေလည်းအများအပြားရောဂါများ, ဗိုင်းရပ်စ်တွေပိုးမွှား, မကောင်းသောမျက်စိဆန့်ကျင်ခြင်း, ဒါ dalee.Kogda အပေါ် duesh ကလေးကလယ်ပြင်ဆန့်ခြင်းနှင့်ပုံပျက်သောနိုငျသညျ, ဖြစ်ပြီး, တစ်ခါတစ်ရံကွန်နက်ရှင်ချိုး, ဤကိစ္စတွင်ထဲတွင်သူငယ်မိမိလယ် bezzaschiten.Tak အရမ်းအားနည်းနေခြင်းနှင့်ထူထောင်မှုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလုံခြုံခဲ့ကြ အကာအကွယ်၏ activation များအတွက်အခြားခြောက်နှစ်ဒါ funktsiy.Do ကလေးခုနစ်ယောက်နှင့်၎င်းတို့၏ astral ပြောဆိုရန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အီ, ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်လယ်ပြင်ဒါခေါ် auric ကြက်ဥကြီးထွားလာစောင့်ရှောက်တစ်နှစ်မှသာမိခင်မှတဆင့် DC ကထပ်မံ Microcontroller တွေဘေ့စတက်သည်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သို့မဟုတ် mnya ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖမ်းယူပေမယ်ငါသည်သူတို့၏မိခင်များအားဖြင့်စွန့်ပစ် statistiku.Deti နို့စို့အရွယ်ကိုကြည့်ရန်သင့်အားအကြံပေးအပေါ် babushki.Seychas materyu.Eto နှင့်အတူကြီးပြင်းလာသောသူတို့အားထက်ပိုလည်း Single-မိဘမိသားစုထဲမှာကလေးများနှင့်စိုက်ပျိုးဆယ်ဆ realno.kak 50 ကာလ၌နေမကောင်းနှင့်စိတ်ရောဂါခံစားနေရပြီးများမှာ လေးလံ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှကျအိမျထောငျဖကျ ahodyat ။
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,410 စက္ကန့်ကျော် Generate ။